Call Log Monitor Pro Apk Download ho an'ny Android 
Salama daholo, miverina miaraka amin'ny rindranasa Android mahatalanjona ho anao rehetra izahay, izay fantatra amin'ny anarana hoe Call Log Monitor Pro. Izy io dia rindrambaiko fanaraha-maso Android, izay ahafahan'ny mpampiasa manara-maso ny antsipirian'ny log-ny ary manampy koa ireo antsipirihany sandoka.
Ny fitaovana Android dia manome ny sasany amin'ireo endri-pifandraisana tsara indrindra ho an'ny mpampiasa. Antso am-peo, sy hafatra an-tsoratra, izay ahafahan'ny olona mifampiresaka. Izy io koa dia manolotra bokim-boky manokana, izay omena ny antsipiriany sy ny tantara ilaina rehetra, fa tsy amin'ny interface tsara.
Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay ahazoan'ny mpampiasa fidirana tanteraka mankany amin'ny boky. Izy io koa dia manome fiasa hanadalana ny namanao sy olon-kafa. Izahay dia hizara an-tsipiriany izany rehetra izany aminareo rehetra.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity app ity ianao dia manoro hevitra anao izahay hijanona kely miaraka aminay ary hijery ity fampiharana ity miaraka aminay. Azonao atao ihany koa ny mifandray aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra, raha manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hamaha ny olanao rehetra izahay.
Topimaso momba ny Call Log Monitor Pro App
Izy io dia fitaovana Android, izay manome ny fampahalalana amin'ny antsipiriany rehetra momba ny antso an-tariby sy ny hafatra an-tsoratra. Izy io dia manome interface tsara, miaraka amin'ireo endri-javatra tsara indrindra ho an'ny mpampiasa. Azonao atao koa ny maneso ny namanao, miaraka amin'ity app ity. Izy io dia manolotra endri-javatra hamitahana ny hafa.
Ao amin'ny antsipirian'ny lozisialy dia manolotra ny angona rehetra mifandraika amin'ilay hazo. Manome fampahalalana mifandraika amin'ny antso am-peo, izay mitovy amin'ny boky ofisialy. Saingy amin'ny statistika, manome ny fampahalalana amin'ny antsipiriany rehetra izy io. Manome tantaram-piantsoana miditra, mivoaka, tsy tratra ary nolavina izy io.
Izy io koa dia manome ny fitambaran'ny antso an-tariby rehetra, izay midika hoe ianao, dia afaka mahafantatra ny isan'ny antso an-tariby anananao sy ny maro hafa. Izy io koa dia manome ny antsipiriany momba ny antso lava indrindra, izay ahafahanao mahita, miaraka aminy izay hiresahanao bebe kokoa ary manome ny isa ampiasaina indrindra araka ny tantara koa izy.
Afaka mahafantatra momba ireo hafatra voarakitra ao ihany koa ireo mpampiasa. Izy io koa dia manome ny fampahalalana mifandraika amin'ny hafatra toy ny lahatsoratra farany, ny isan'ireo hafatra an-tsoratra nalefa, sy ny maro hafa. Ao amin'ny faritra prank, azonao atao ny manova ny antsipiriany. Ny mpampiasa dia afaka mampiditra tantaram-piantsoana hafa, fidirana ary hafa.
Io no fomba tsara indrindra hanaitra ny namanao sy ny olon-kafa. Misy endri-javatra bebe kokoa amin'ity rindranasa ity izay azonao zahana. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary atombohy ny fahazoana ny mombamomba anao rehetra momba ny kaontinao voarakitra sy maro hafa.
anarana Call Monitor Monitor Pro
Anaran'ny fonosana com.softrelay.calllog
Ny sasany amin'ireo fiasa dia voatonona ao amin'ny fizarana etsy ambony, saingy misy maro hafa azonao zahana. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Noho izany, ao amin'ny lisitra etsy ambany, hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity izahay rehetra.
Raiso ny fidirana feno amin'ny Log
Azo ampiana fampahalalana sandoka ihany koa
Ny interface dia mitovy amin'ny Book Logged tany am-boalohany
Tsy misy safidy tsy ilaina
Tsy misy izany ao amin'ny Google Play Store noho ny antony sasany, fa hizara rohy miasa azo antoka sy azo antoka amin'ity fampiharana ity izahay. Noho izany, tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana ilaina, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Tsindrio izany ary hanomboka ho azy ny fisintomana.
Raha vantany vao vita ny fisintomana dia mila manova ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, mandehana fotsiny amin'ny Settings ary sokafy ny Panel Security, avy eo Checkmark amin'ny 'Source tsy fantatra'. Aorian'ny nahavitan'ity dingana ity dia afaka mametraka ny rakitra Apk amin'ny fitaovanao ianao.
Call Log Monitor Pro Apk no fampiharana tsara indrindra, izay manome ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny fidirana amin'ny antsipiriany lalina. Amin'ny maha-zavatra niainanao manokana, ny safidy prank dia iray amin'ireo tsara indrindra hahafinaritra ihany koa. Noho izany, ampidino ity rindrambaiko ity ary alao ny antsipiriany rehetra.
Sokajy Apps, Tools Tags Call Log Monitor Pro, Antsoy Log Monitor Pro Apk, Call Log Monitor Pro App Post Fikarohana
Shoora VPN Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android